MP4 Best ID3 Tag Editor for Windows-OSX-Linux
MP4 Best ID3 Tag Editor for Windows / Mac OS / Linux
Inkastoo dad badan oo ka fekeraan MP4 sida qaab file video ah oo kaliya, files la kordhin .MP4 sidoo kale ku jira music iyaga in aan il video kasta. Taas ayaa ka dhigaysa MP4 qaab wejiyo ugu nooca file fariida waa la jaan qaada dhamaan ciyaartoyda warbaahinta loo isticmaalo caalamka oo idil. Tag MP4 tafatirayaasha waa barnaamij miisaanka in laguu ogolaado in aad si ay u maareeyaan metadata ee files audio. Inta badan tifaftirayaasha tag in karaa ID3 MP4 tags dubaridi sidoo kale taageeri qaabab kale file. Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay u isticmaalaan barnaamijka hal si ay u maareeyaan files audio kala duwan la kordhin kala duwan.
Qaybta 1. MP4 Best ID3 Tag Editor for Windows
Qaybta 2. Best MP4 ID3 Tag Editor for Mac OS X
Qaybta 3. MP4 Best ID3 Tag Editor u Linux
mp3Tag Pro horumarsan by ManiacTools oo ayaa helay ugu sareeya ratings user iyo qadarin loo eegin xaqiiqda ah in ay tahay (bixisay) barnaamijka shareware ah.
mp3Tag Pro waxaa loo arkaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ugu diro daafaca ID3 tag tifaftirayaasha heli karaa online in sidoo kale taageertaa Dufcaddii ID3 tag tafatirka. Ma aha oo kaliya, iyadoo mp3Tag Pro tafatirka Dufcaddii sidoo kale oo la qaban karo files leh qaabab kala duwan. Taas macnaheedu waxa weeye in dheeraad ah waxaa la lahayn dheer loo baahan yahay in aad tags ka ID3 ee MP4, MP3 ah, iyo files FLAC ee kalfadhi gaar ah xaalkaa, iyo tags ID3 ee dhammaan faylasha ah ee loo maarayn karo in go hal.
• mp3Tag Pro kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi farshaxanka iyo lyrics aad M4A / kuwan raadkaygay MP4 album.
• Kuu ogolaanayaa inaad magaca files isticmaalaya macluumaadka in ay si fudud u yeela karto tags ah.
• Taageerada labada ID3v1 iyo ID3v2.
• Intaa waxaa dheer in MP4 , mp3Tag Pro taageertaa qaabab file kale oo kala duwan oo ay ku jiraan MP3, FLAC, regelingen, iwm
• suurto gashay tafatirka Dufcaddii ee ID3 tags iyo in aad ku qaabab file kala duwan. Qasaarooyinka • Waa shareware ah oo la Timaadda tag qiimo. • Dadka qaarkood ayaa ka cabanaya ku saabsan interface, isagoo sheegay in ay u muuqato xoogaa dhacsan oo waxaa u babac dhigaya si ay u fahmaan barnaamijka, gaar ahaan marka ay ku cusub tahay codsiga. • Miyuu interface yar-windowed taas oo ka dhigaysa waa ku adag tahay dadka isticmaala in ay haystaan ​​aragti cad oo ka mid ah fursadaha la heli karo.
Jaikoz waa MP4 ID3 editor tag wanaagsan ee OS X madal sida feedback users '. Version ugu danbeeyay barnaamijka waa in 8.2.1 la sii daayay on February 17, 2015.
Jaikoz waa ID3 editor tag hufan ee X Mac OS oo aan ku taageeri kaliya MP4, laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tags ID3 of qaabab file maqal ah oo kale sida FLAC, MP3, WMA, iwm ee xaalkaa .. barnaamijka wuxuu u baahan yahay processor Intel, iyo OS X 10.7 ama kor ku xusan oo ay la socdaan Java 1.5 ama ka sarreeya si fiican u shaqeyo.
Jaikoz auto-qaabab columns isticmaalaya feature ay AutoCorrect shaqeeya in lala AutoFormat, Halkan ka suuragelinayo xarfo si toos ah iyo formatting kale macluumaadka hadba sida loogu baahdo.
Jaikoz kulan metadata ee files audio 'la MusicBrainz - database a si fiican u yaqaan in ay ilaaliyaan xogta ku dhawaad ​​10 milyan oo kuwan raadkaygay audio.
• Jaikoz loo heli karaa Windows, OS X, Linux iyo.
• The horumarinta ee Jaikoz yabooho in ay bixiso oo dhan casriyaynta software inay iibsanayaan ee Meyeydaan ee gabi ahaanba lacag la'aan ah.
• Waddada la taageero MP4 ah, Jaikoz sidoo kale kuu ogolaanaya in aad xaalkaa ku ID3 tags of qaabab file kale oo ay ku jiraan OggVorbis, FLAC, WMA, iwm
• Si toos ah u ID3v1 iyo ID3v2 tags oo ka mid ah files audio synchronizes.
• Taageerada Ingiriiska, Greek, Jarmal, Isbaanish, iyo kuwa kala afka Talyaaniga. Qasaarooyinka • Jaikoz waa shareware iyo yimaado iyadoo qiimahaas ah. • In uu furayaasha toobiye ku koobnayn, oo inta badan howlaha waa in la sameeyaa haddii kale. • Ma aha in interface wanaagsan-raadinta iyo u fududahay in la isticmaalo.
EasyTAG waa freeware oo multi-format taageeraya ID3 editor tag, waayo, Linux oo la mahadiyo users badan caalamka oo dhan. Iyaga oo taageero ka afaf badan, barnaamijka waxaa laga isticmaalaa dalal iyo dad badan oo ka kala socda gobollada iyo luqado kala duwan.
EasyTAG taageertaa auto-tagging in si toos ah populates Beerihii baahisey isticmaalaya info filename iyo buugga. Iyadoo aragtida nooca-geed ee interface ah, daalacanaya subdirectories wuxuu noqonayaa fudud oo la yaabka lahaa expedites hawlaha maamulka tag ID3.
• EasyTAG taageertaa qaabab file maqal ah badan oo ay ku jiraan MP4, M4A, MP3, Ogg Opus, FLAC, WavePack, MusePack, MP2, iwm
• Barnaamijka waxaa awood u autocompleting macluumaadka aan dhamaystirnayn laakiin muhiim ee beeraha.
• software waa awood bedelayaan faylasha sida ay sheegayaan warbixinada Tagged.
• Barnaamijku wuxuu kaloo u ogolaanaya processing Dufcaddii oo ka mid ah files in deganaato buugga hal. Qasaarooyinka • EasyTAG mararka qaarkood shilka marka raadinta faylka loo sameeyaa.
Way fududahay in la saxaa ID3 tags on MP4 iyo faylasha kale audio bixiyo waxaad ka heli Tifaftiraha tag ID3 ugu fiican in fulin kara baahida oo dhan. Haddii aad tahay xirfadle ah oo aad rabto inaad ku darto ama ID3 tags on files audio ujeedo ganacsi dubaridi, waxaa la soo jeediyay in waa in aad u tagto bixisay ID3 tag editor ah si ay u helaan taageero farsamo oo degdeg ah oo hufan, iyo wararka cusub ee joogtada ah ee barnaamijka. Waxaa kale oo lagu talinayaa in la soo qaado editor tag taageera formatting Dufcaddii ah. Sidaas waxaad badbaadin kartaa qadar wanaagsan waqti by dedejinta nidaamka oo dhan ID3 tag tafatirka hab la fududeeyey.
Sida loo Beddelaan MP4 in regelingen ama regelingen in MP4?
Sida loo Beddelaan MP4 in MOV la Loss Tayada Zero
Top 10 Players MP4 for Android
Sida loo soo dejinta Video MP4 galay Adobe jilitaankii Pro
> Resource > MP4 > MP4 Best ID3 Tag Editor for Windows-OSX-Linux